လွမ်းသူ့ရင်ထဲနှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၀တ္ထုများ (20% Off) – Pann Satt Lann Books
လွမ်းသူ့ရင်ထဲနှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၀တ္ထုများ (20% Off)
ဒီစာအုပ်ထဲတွင် အမျိုးသမီး၅ဦးရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှု၊ခံယူချက် နှင့် စိတ်ခံစားချက်များကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
“ညိုက ချောမောလှပ ထက်မြက်လှသော မိန်းမချောတစ်ယောက်ဆိုသည်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မရှိပါ။ ကို့ရဲ့ ချစ်သက်တမ်း ၆ နှစ်ကျော်ကာလ ချစ်ရေး ချစ်ရာကိုမှ မငှဲ့ကွက်ပဲ ရက်ရက်စက်စက် ဖြတ်တောက်သွား သည်လောက်ထိ အပြစ်ပြောစရာလည်းမရှိခဲ့သူပါ။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ကြံခံရတော့မည်ဟု ယူဆဖွယ်ရာများကိုလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ခွင့် ရရှိစေရန် စီမံခြင်းလည်း မပြုနိုင်ခင်မှာ ငှဲ့ကွက်ခြင်းမရှိလှည့်ထွက်သွားသူ၏ စိမ်းကားခြင်းကို တစ်သက်စာမျှော်လင့်မထားခဲ့ပေသိဖြစ်စဉ်ကတစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီ”
(ညိုက စွန့်ပစ်ခံဘဝနဲ့ ရှင်သန်၊ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ဘာကြောင့် သတ္တိတွေရှိလာရတာလဲ။)
သည်ရွာလေးမှာ သားအတွက် နွေးထွေးမှု ပေးရုံသာတတ်နိုင်ရှာသော ငြိမ်းအတွက် သားက ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးသွားသည်။ ငြိမ်းသည် ချစ်တတ်သည်မှ အပ ဘာတာဝန်မှ မယူတတ်ခဲ့သူ ဟု ခံစားရမိသည်သားဘဝကို မြင့်မားစေရေအောင် တာဝန်ယူခဲ့ သူမှ ငြိမ်းမဟုတ်၊ သူ့ ဖခင်သာ ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းက သစ္စာမဲ့သူ ဟု ဆိုကာ သူ့ကို ထားခဲ့သည်၊ သူ့ကိုသာမက သားနှင့် သိမ်းကိုပါ ထားခဲ့ရသူ။သားကို ချမ်းအေးစွာပွေ့ဖက်ထားနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ရန် ကြီုးစားနေဆဲမှာ၊ သားအဖေကို တော့ ခွင့်လွတ်နိုင်စွမ်းမရှိနိုင်ခဲ့ပါ။
(ငြိမ်းက ဘာဖြစ်လို့သားကို ထားခဲ့ပြီး သစ္စာဖျက်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းကို စွန့်ပစ်ခဲ့ရတာလဲ။)
ဆရာသိရင် ဆရာကြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုသော နန်းဒေဝီရဲ့ အကြောင်းကို စိတ်ထဲမှာ တွေးနေမိသည်။ အတွေးတွေပေါ် အတွေးတွေ ဆင့်ကာ ရင့်သထက် ရင့်လာသော အခါအတွေးတွေက မိုးလုံးပြည့် အုံ့ဆိုင်းလာကြပြန်တော့သည်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းလုံး အတွေးတွေပြည့်ကာဖုံးလွှမ်း သွားသည်။ ကိုအောင်က ဝင်လာသမျှ ကို မောင်းထုတ်ပစ်ရန် ကြိုးစားလိုက်ရပါတော့သည်။
(နန်းဒေဝီရဲ့ တကယ့် အိပ်မက်က ဘာလဲ)
ဖက်ရှင်ကျကျနေထိုင်တတ်လာသည်။ ပိုချော ၊ ပိုလှလာသည်။ စာဖတ်ခြင်းမှ သူများနှင့် မတူသည့် ထူးခြားသော အလှ နှင့် ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်သည်။ အိအိခင် တစ်ယောက်တည်း လောကဓံတွေကို ခံစားနေရချိန်မှာ စာဖတ်ခြင်းက များစွာအထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည် ကိုအိအိခင်တစ်ယောက် အသိဆုံးပါ။ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် သည်မြို့ကလေးဝန်းကျင်မှာ တောတွေ ၊ တောင်တွေ ၊ မြစ်တွေ ၊ ချောင်းတွေ ရဲ့ အဆုံးမဲ့ အလှကို ပို၍ ချစ်မိသွားစေသည် ထင်ပါ၏။ အချိန်တစ်ခုမှာ ပညာ ၊ ကုသိုလ် ၊ ဥစ္စာ တစ်ခုခု ရနေအောင် အိအိခင် ကြိုးစားနေတတ်ခဲ့ပါပြီ။
(အထက်တန်းကျတဲ့ အိအိခင်က ဘယ်သူ့ကို အားကျခဲ့တာလဲ)
အပြစ်တင်ချင်သော မျက်လုံးများကို မြင်ရပေသိ အရီးစိန်မျက်နှာ လွှဲလိုက်ကာ ရွာဦးစေတီဘက်သို့ နောက်ပြန်မျှော်ကာ တစ်ချက်ကြည့်ရင်း မိုးရိပ်တွေ ညို့လာသည်ကို မြင်လိုက် ရသဖြင့် အတွေးတို့က ပြတ်တောက်သွားကြပြန်တော့သည်….
၀တ္ထုတိုများထဲတွင် ခံစားမှုရသ သက်သက် မဟုတ်ပဲ သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတများနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်များပါ ရရှိစေမယ့် သုတ ရသ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။
လဝန်းသစ်စာပေ၊ 2020 ဇွန်လ၊ (ပ-အကြိမ်)
“လွမ်းသူ့ရင်ထဲနှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၀တ္ထုများ (20% Off)” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply